चोरदर्शन – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २१
जम्मैलाई घालेघुलेमा एकै ठाउँमा मिसाएर ‘सबै चोर हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लालायित छ चोरहरूको एउटा झुण्ड । पार्टी पनि सप्पै चोर ! नेताहरू पनि सप्पै चोर । यस्तो बकवास गर्दै हिड्ने मान्छेलाई तपाइँले पनि भेट्नु भएकै होला । त्यसले के कारणले सप्पैलाई चोर भनेको होला ? ख्याल गर्नु भएको छ ? म आज त्यही चोरसित बोलिरहेको छु ।
हरेक मान्छेलाई चोर देख्छौ तिमी, अनि कहाँ कहाँ गएर के के गर्छौ ? थाहा पाउन खोज्दै छु, तिम्रो यो दर्शनको मूल कहाँबाट फुट्यो ? विनाछानविछ्यान सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाउने यो गोलमालको दर्शनको अर्थ लगाउन खोज्दै छु ।
मान्छेले आफ्नै परिभाषामा संसारलाई बुझेको हुन्छ । कसैले यो जिन्दगी व्यर्थ छ भन्दै हिँड्छ र साँच्चै हृदयको भाषा बोलेको हो भने त्यस मान्छेले आत्महत्या गर्ने सम्भावना प्रवल छ । हृदयमा आँट र उत्साह केही पनि नभएको कायरले मात्र यस्तो बकवास गर्र्दै हिँड्छ । जीवनको कुनै उद्देश्य नभएको, आवश्यक पर्दा कुनै जोखिम बेहोर्ने हिम्मत नभएको, मान्छेको माझमा हेलिएर चुनौतीहरूको सामना गर्ने हुति नभएको मानिसले बोल्ने भाषा हो यो ।
यो संसार सङ्घर्षको रङ्गमञ्च हो भन्छ भने त्यो अवश्य लडाकु हुनुपर्छ । कायरले सङ्घर्ष नै जीवन हो भनेर परिभाषित गर्न सक्तैन । यो संसारलाई चोरैचोर देख्ने मान्छे कि स्वयं चोर हो कि कुरै नबुझी चोरको हल्लामा बगेको घसेटा हो । यो संसारमा भएका सम्पूर्ण मान्छेलाई सज्जन देख्ने मान्छे सज्जन होइन । सुस्त मनस्थितिको मान्छे हो । यहाँ त सज्जन पनि छन् र दुर्जन पनि छन् । सज्जनलाई सज्जन र दुर्जनलाई दुर्जन देख्न नसक्नु मान्छे को दुर्भाग्य हो । यही दृष्टिदोषका कारणले मान्छेहरूले धोका खान्छन् ।
तिमीलाई आफू चोर भएको कुरा राम्ररी थाहा छ । तिम्रो चोरीकर्म कसै न कसैले थाहा पाएको पनि तिमीलाई थाहा छ । थाहा नपाउनेहरूले पनि कुनै दिन थाहा पाउने कुरो तिमीले बुझेका छौ । सज्जनहरूको बोलाबाला भयो भने आफ्नो सम्मान रहँदैन भन्ने ज्ञान पनि तिमीलाई छ । वास्तवमा तिमी डराइरहेका छौ र निडर भएको नाटक गरिरहेका छौ । ‘चोरी मानिसको स्वाभाविक धर्म हो, सबै मान्छे चोर हुन्’ भन्ने तर्कलाई जिताउन सके त्यसले आफ्नो चोरीलाई अपराधमुक्त गराउँथ्यो भन्ने बुझेर सम्भाव्य दुर्घटनाबाट बच्नका निम्ति तिमीले निकालेको गुप्त चलाखी अर्थात् मनोविज्ञान चाहेर पनि लुकाउन सकेनौँ । तित्राको मुखै वैरी भनेको यसैलाई हो ।
तिमी जुन पार्टीमा छौ त्यो पार्टी खत्तम छ । तिम्रा नेताहरू वैयक्तिक वैभवका निमित्त राजनीति गरिरहेका छन् । तसर्थ तिनका पक्षमा उभिएर बोल्ने एउटा पनि बलियो तर्क तिमीसित छैन । जब तिम्रो पार्टी र त्यसका नेताका गलत विचारका बारेमा आलोचना हुन्छ तब तिमी तिल्मिलाउँछौँ । तिमीसित जित्ने नैतिकता र हार्ने हिम्मत छैन । हाम्रा नेता चोर हैनन् भन्न सक्तैनौ अनि अन्य दलका समेत जम्मै नेता चोर हुन् भनिदिन्छौ । अर्काको कमजोरीलाई पछ्यौरा बनाएर आफ्नो अपराध ढाक्नु तिम्रो आदतै बनिसकेको छ । प्रमाण तिमीसित केही हुँदैन, हचुवामा बोलिदिन्छौ ।
राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने राजनेताले सफा राजनीति गर्दै गर्दैन । उसले बुझेको राजनीति नै फोहोर छ, अनि कसरी सफा राजनीति गर्छ । आफूले जित्नको लागि जे पनि गर्छ, हुनुसम्म फोहोर खेल खेल्छ । जब कसैले किन यस्तो फोहोरी खेल खेलिस् भन्छ अनि उसले जवाफ दिन्छ, राजनीति फोहोरी खेल हो । यस्तो राजनीतिमा सबभन्दा ठूला फोहरी नै सबभन्दा ठूला राजनेता कहलाउँछन् । सबै चोर हुन् भन्ने हल्लाको मुहानमा पनि यिनै फोहोरी नेताहरू छन् । तिमी त्यही नेता अथवा त्यसैको अन्धो कार्यकर्ता हौ ।
सबैलाई चोर भनिसकेपछि तिम्रो नजरमा बुद्ध पनि चोर हुन्, माक्र्स पनि चोर हुन् । तिम्री आमा चोर्नी हुन्््््, तिम्रा बा चोर हुन् र तिमी चोर हौ । इच्छा लाग्यो र क्षमताले भ्यायो भने चोर जे चोर्न पनि तयार हुन्छ । तिमीले आमाका सुखहरू पनि चोर्न सक्ने भयौ । बाका खुसीहरू चोर्न पनि गारो मान्ने भएनौ ।
शब्द जसरी प्रयोग गरे पनि सारमा तिमीले दुनियाँलाई दिन खोजेको सन्देश यही नै हो— ‘सबै चोर हुन् त्यसकारण कसैका कुरा पनि नपत्याऊ । सबै चोर हुन््््् त्यसकारण कसैलाई चोर भनेर किटान गर्ने काम नगर । तिमीले जसलाई सज्जन भन्छौ त्यो पनि चोर नै हो । संसारमा कोही पनि सज्जन छैन । त्यसकारण हरेकले हरेकलाई अविश्वास गर । मैले पनि चोरिरहेको छु । तिमीले पनि चोरिरहेका छौ । छैनौँ भने चोर । यो चोरहरूको संसार हो । यहाँ विजय हासिल गर्नका निमित्त चोर्नु पर्छ ।’
मान्छेको धूर्तता र बेइमानीको पाटोलाई खुब जोडतोडका साथ प्रचार गर्छौ । ईमानका, त्यागका, निश्छलताका, निर्मलताका कुराहरू तिम्रा छलफलका विषयमा पर्दैनन् । आफू जस्ता छौ त्यस्तैलाई तिमीले प्राथमिकता दिएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कुकुरले कलो खान दगुरेको मात्रै देख्छौ तिमी, सहिदले बाँचेको महान् जीवनको चित्र तिम्रो नजरमा घुस्तै घुस्तैन । सज्जनतालाई उपेक्षा गर्छौ, नदेखेझैँ गर्छौ र दुर्जनतालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्छौ । तिम्रो नजर लोभ र पापले अन्धो भएको छ ।
तिमी जानी वा नजानी दुनियाँलाई दिग्भ्रमित पार्ने अभियानमा सामेल छौ । म तिम्रो दर्शनको विरुद्धमा छु । तिम्रो दोषी नजरको विरुद्धमा छु । यो संसारमा विष मात्रै छैन, अमृत पनि छ । अन्धकार मात्रै छैन प्रकाश पनि छ । विनास मात्रै छैन, सिर्जना पनि छ । सबै मान्छे चोर पनि होइनन् र सबै पार्टी उस्तै पनि हुँदैनन् ।